फुलन्देको आमा बनेका उमेश राई, गल्फ्रेण्ड सँग डेटिङ्गमा यस्तो अवस्थामा भेटिए…(भिडियो सहित) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/फुलन्देको आमा बनेका उमेश राई, गल्फ्रेण्ड सँग डेटिङ्गमा यस्तो अवस्थामा भेटिए…(भिडियो सहित)
काठमाडौँ २१ जेठ, । पछिल्लो समय ‘नेपाल टेलिभिजन’ बाट प्रसारण हुँदै आएको निकै चर्चित कार्यक्रम ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’का एक पात्र हुन् फुलन्देकी आमा । उक्त कमेडी क्लबमा नेपालका नाम चलेका कलाकार र केही नयाँ कलाकारहरूको सहभागिता रहेको छ ।
हरेक सोमबार ९ बजे प्रसारण हुने कार्यक्रममा दीपा श्री निरौला सभापति रहेकी छिन् भने कार्यक्रम चर्चित हास्य सञ्चालन कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) ले गरेका छन् । जितु र दीपा सँगै, हास्य कलाकार राजाराम पौडेल, राजेन्द्र नेपाली (लट्टे), उमेश राई (फुलन्देकी आमा) र अन्य कलाकारहरूको अभिनय देख्न पाइन्छ । कार्य्रक्रममा उमेश राई फुलन्देकी आमा बनेका छन् । उनको प्रस्तुति धेरै दर्शकहरूले मन पराएका हुन्छन् ।
यसै बिच क्यानडा नेपालमा उमेश राई अर्थात् फुलन्देकी आमा सँग रमाइलो अन्तरवार्ता लिइएको छ । फुलन्देको आमा वास्तवमा केटा हुन् भने उनको वास्तविक नाम हो उमेश राई । उनी फुलन्देको आमा नामले परिचित छन् । उनले हामीसँग गरिएको कुराकानीमा निकै नै हँसाएका छन् । अहिले उनी एक म्युजिक भिडियोको सुटिँगमा व्यस्त छन् । सुटिँगकै क्रममा हामीसँग कुरा गर्दै उमेश राईले अब छिट्टै नै आफ्नो अभिनय रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउने बताएका छन् । भिडियोमा हेर्नुहोस् फुलन्देको आमासँग हामीले गरेको यो रमाइलो कुराकानी
धना परियार रुदै मिडियामा, रवि लामिछानेको नाममा ठकुरिले खाएकै हुन् त यत्रो रकम! ( भिडियो )
बिच सडकमा चालकको कुटाई खाने लक्ष्मी के भन्छिन् ! (हेर्नुहोस भिडियो)